Thursday, 11 Jul, 2019 8:44 AM
हरेक मुद्दामा बहस सकारात्मक हो तर बहसमा जब एक पक्ष पूर्णतः निषेध हुन्छ वा बहस तर्कमा नभएर भावनामा बहकिन्छ, त्यसले समस्या थप्छ । मिडिया काउन्सिल र गुठी सम्बन्धी विधेयकको बहसले समस्या चर्किएन, समाधानतिर गयो । सुवास नेम्बाङको पहलमा सत्तापक्षकै सांसदले अब पत्रकारका जायज चासोलाई संशोधन प्रस्तावमा समेट्दैछन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले असार २४ मा आन्दोलन फिर्ता लियो । एउटा चुनौती भने छ– प्रेस स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताबीचको सीमा छुट्टिनैपर्छ । उपत्यका र बाहिरका गुठियारसँगको परामर्शमा गुठी विधेयक सरकारले ल्याउँदैछ । धर्म संस्कृतिको संरक्षणसँगै भूमिहीन मोहीको समस्या समाधान गर्नैपर्छ । सरकारलाई पाठ भयो, गुठियारलाई पनि सन्देश गयो कि उनीहरू अनुगमन बाहिर छैनन् ।
प्रचार भयो– सरकारले भारतको दबाब थेग्न सकेन । र, आयात खुला गर्यो । समस्या दुई थिए । एउटा, नेपालले सीमामा ‘ल्याब’ नराखी किन यो कार्यान्वयनमा ल्यायो ? कार्यान्वयनमा ल्याएपछि किन भारतलाई विश्वासमा लिन सकेन ? अर्को, भारतको सम्बन्धित संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र मानेपछि किन सीमामा यो पुनःपरीक्षण गर्नुप¥यो ? यी दुई प्रश्नको जवाफ नेपालले दिनुपथ्र्यो तर बेलैमा उपयुक्त सञ्चार गर्न नसक्दा असमझदारी उत्पन्न भयो ।
सरकारले इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवाडर््स (आइफा) नेपालमा गर्न स्वीकृति दियो । सन् २००० को जुन २४ मा लण्डनबाट सुरु भएको आइफा प्रत्येक वर्ष भारतबाहिर फरक फरक देशमा हुने गर्छ । यो कार्यक्रममा अमिताभ बच्चनदेखि भारतका चर्चित दुई सय कलाकार सहभागी हुन्छन् । आइफा सचिवालयले काठमाडौँमा गर्न पाउँ भन्दै पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो, जसमा नेपालले बहन गर्ने आर्थिक दायित्वबारे उल्लेख छैन । तर सरकारले ४० करोड दिने भनेर हङ्गामा भयो । मन्त्रीहरूका कथन मेल खाएनन् । सत्तारुढ नेताबीच विवाद भयो, संसदीय समितिले नगर्नू भनेर निर्देशन दियो ।
पर्यटन बोर्डका सीइओ दीपकराज जोशीले ‘यसपटक हुने सम्भावना कम भयो’ भन्ने बयान दिनुभयो । अझै सरकारले नगर्ने भन्ने औपचारिक घोषणा गरेको छैन । आइफा हुन्छ वा हुँदैन, त्यो फरक विषय हो । तर त्यसलाई भारतीय फिल्म र संस्कृतिको प्रवद्र्धनका रूपमा एकोहोरो प्रचार भयो । सांस्कृतिक साम्राज्यवादका रूपमा अथ्र्याइयो । जबकि यो अवार्ड भारतबाहिर नै हुन्छ । त्यसमा पनि भम्रण वर्ष २०२० घोषणा गरेका बेला यो काठमाडौँमा हुँदा सहयोगी नै हुन्थ्यो/हुन्छ । तर बुझ्दै नबुझी विरोध सुरु भयो, भावनात्मक राष्ट्रवादले थिच्यो ।
नेपालको विगत आन्दोलनको हो । आन्दोलनबाट विकासतर्फ लाग्दा क्रमभङ्गता हुन्छ । राजनीतिक क्रान्तिपछिको आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने हरेक राष्ट्रको विगत यस्तै हो । कम्युनिष्ट चीनले विकास थाल्दा न साम्यवादी सोचलाई निरन्तर अघि बढाउन सक्यो न वर्गीय हितलाई केन्द्रमा राख्यो । किनकि चीनमा धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल छ भने नियन्त्रित राजनीतिक व्यवस्थाभित्र पश्चिमा शैलीको खुला समाज छ । राजनीतिमा माओ र विकासमा देङ नभएको भए चीन दोस्रो विश्वशक्ति हुने थिएन ।
विकासका लागि परम्परागत र शास्त्रीय राजनीतिको घेरा तोड्नैपर्छ । आरोप महाथिरलाई र ली क्वान युलाई पनि लाग्यो– प्रजातन्त्रलाई सीमित गरे भनेर । आखिर महाथिरको माग फेरि भयो । रुसमा पुटिन सत्ता शीतयुद्धकालीन शक्तिमा फर्केको देखिंदैछ । जब विकास हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्छ । विकासले नागरिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्छ । बाहिर ट्रम्पको राक्षसी रूप छ तर उनले अमेरिकी चाहनाको वास्तविक नेतृत्व गरेका छन् भन्ने विश्लेषण पनि छ ।